Xulka Bilaashka ah ee Fonts ee Naqshadeeyayaasha Shabakada Xirfadlayaasha | Abuurista khadka tooska ah
Fran Marin | | Fuentes, Khayraadka
Dhowr toddobaad ka hor waxaan idiin soo bandhignay qaybtii ugu horreysay ee noocyo bilaash ah oo xirfadlayaal ah oo loogu talagalay naqshadeynta shabakadda. Qeybtaan seddexaad waxaan ku sooqaadayaa xulkii ugu xiisaha badnaa wadar ahaan 18 nooc oo dheeri ah oo aad u isticmaali karto naqshadahaaga. Waxaan ku xusuusinayaa inaad heli karto labada qaybood ee ugu horreeya buug-gacmeedkayaga iskuxirkaan iyo waliba halkan ka.
Haddii aan baarno shabakadda waxaan heli karnaa saldhig wanaagsan oo aan ku shaqeyno oo aan ku horumarinno shaqadeena. Wax walba waxay ku xirnaan doonaan astaamaha farsamo ee mashruuceena iyo dabcan nooca macmiilka iyo dadweynaha aan diirada saarayno.
Dhammaantood waa bilaash waxaadna ka heli kartaa shabakadda, in kastoo aan dhammaantood ku soo wada ururiyey feyl guud oo aan u banneeyey qof kasta oo 4 la wadaagay. Weligaa ha iloobin muhiimadda cunsurkan, markaan dooranno farta waxaan ku baabtiineynaa barteena si uun, waxaan ku dareynaa waxoogaa saameyn ah, qaar macno leh iyo qiime dheeri ah. Ka faa'iideyso xaqiiqda ah in maanta aan haysanno xad-dhaaf ah fursadaha bilaashka ah oo si sax ah u sabab ah doorashada mid ka mid ah way adkaan kartaa. Go'aanka go'aanka, iskuday inaadan lumin diirada. Waxaad ka heli doontaa waxyaabo layaab leh oo run ah, laakiin dhammaantood iskumid kama aha shakhsiyadda fikraddaada, ganacsiga aad metelayso, markaa waa inaad ujeeddooyinkaaga maskaxda ku haysaa oo aad si taxaddar leh u falanqeeysaa nooca soo-jeedintaada.
Waxaad ka heli kartaa xirmadayada xiriirka soo socdaIyadoo aan waxbadan la dhihin ... Ku raaxayso!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » Xulashada font ee bilaashka ah ee naqshadeeyayaasha websaydhka
Wax kale waad ku shubi kartaa meel kale, tusaale ahaan, in 4shared uu yahay wax xun oo ay ka buuxdo spam.
Buugga aqoonsiga shirkadeed: Ku dabbaqidda shaambadda taageerooyinka jirka